Mooryaan Xasan Jaamici Oo Gaarey Bariire, Xiili Liibaan Madaxey. | Jamaame News Network
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa u xaqiijiyey warbaahinta Raaxoole in kolonyada ciidamada Amisom maqribkii shaley ku soo galbiyeen deegaanka Bariire isla markaaan halkaasi ku hoydeen mooryaan Xasan Jaamici iyo ciidamadiisa.
Dadka ku sugan deegaanka Bariire ayaa arkay mooryaan Xasan Jaamici iyo ciidamadiisa oo sii galaya saldhiga Bariire kaasoo horey ugu sugnaa mooryaan Liibaan Madaxey oo dhibaato ka geystay gobolka Shabeellada Hoose.
Xasan Jaamici oo horey Amisom ka eryisey deegaanka Shalambood waxa uu iminka u muuqdaa mid laga soo direy Muqdidho si u garab istaago mooryaan Liibaan Madaxey, xaalada deegaanada gobolka shabeellada Hoose waxa ay muuqataa xaalad dagaal oo dib u bilowdaan dagaalkii lagu Baacsanayo mooryaanta kasoo duushay gobolada dhexe.
Jarnal Cabdullaahi Cali Axmad Waafow waxa uu dhawaan ku baaqay nabad waarta balse arinta ayaa mar kale ku qasbeysa in ay dagaalamaan shacabka uu hogaamiye u yahay.